Dambudziko Botnets! Chengetedza Kakombiyuta Yako neSemalt
Bot ndiyo shanduro yepurogiramu inoita mabasa pamirairo yakadai sekuenzanisa injini yekutsvaga s. Bhoti dzakanaka pakuita mabasa okudzokorora. Kunyange zvakadaro, inogona kushandiswa nekuda kwezvinangwa zvisina kunaka nema cybercriminals zvakadai sokutora utongi hwekombiyuta ine utachiona. Botnets inyanzvi yemakombiyuta akabatana ega ega anoita rimwe basa - nokian r17.
Muzhinji maitiro e-cybercriminals anoshandisa botnets nenzira dzinotevera:
Kutumira spam emails kana zvimwe zvirongwa zvemukana.
Shandisa vashandi kuwana mari yavo yakaoma-yakawana.
Kubvumira muridzi webhusaiti kuti awane mari kubva ku "fake kunotsvaga."
Botnets uyewo zvangu zvinyorwa.
Kutanga kukanganiswa kwebasa kurwisa kune vamwe vashandisi vakatsanangurwa kana mawebsite.
Vatengesi vepaIndaneti vanoda mari kubva kune vashandi vepanzvimbo mukutsinhana kwekuwana zvakare kutonga pamusoro pemakombiyuta kana nzvimbo..VaCybercriminals vanoshandisawo botnets kuti vashandise zvirongwa zvakasiyana siyana zvisiri pamutemo. Semuenzaniso, ma-cyber-criminals anoshandisa botnets kuti afukidze peji yewebhu nechitima panguva imwechete achishandisa makombiyuta ane utachiona, saka, kuwedzeredza webhusaiti nekuita kuti zviite zvisina kunaka uye zvishoma nezvishoma kana kuita kuti webpage isabvumirwe nevashandisi vanoda kuishanyira. Botnets inoshandiswa kugovera mavirusi uye spyware kumakombiyuta. Vanoba ruzivo rwemunhu nemumwe wega kubva kumakombiyuta matsamba emakadhi emakadhi echikwereti, mapepasi uye mabhizinesi ekuzivikanwa pakati pevamwe ruzivo rwevamwe ruzivo rwomunhu oga uye vanoshandisa iyo kubata mazita, kuwana zvikwereti kana kutenga zvigadzirwa pasi pezita remushandisi.
Zvisinei, mabhutsi anowanzotambudza makombiyuta akazarura, heano mazano akawanda anogona kushandiswa kuti ave nechokwadi chekudzivirirwa kumabhi kana kuti kuderedza dambudziko rinowanzobatanidzwa. Pasi pane mamwe mazano akataurwa naJack Miller, we Semalt Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira:
Isa pane-rated zvakakwana zvakachengeteka software sezvakaita Norton Internet Security. Iyi software inokosha pakutsvaga nekudzivisa iyo malware, saka, kudzivisa kusakwanisa kuwana rusununguko rwekombiyuta yako.
Iso software yaunoshandisa inofanira kugadziriswa, uye iwe unogona kuita izvi nekugadzirisa zvirongwa zvako zvepurogiramu
kuti uvandudze zviri nyore.
Wedzera mararamiro ezvidziviriro pane ma browser.
Iva nechokwadi chokuti iwe unotarisa kune mawebsite akachengeteka.
Unogona kuita izvi nekunamatira kune nzvimbo dzinonyatsozivikanwa iwe uye mapeji ewebhu anoonekwa pamapeji mashomanana ekutsvaga. Uyewo, rega kuvhara pazvibatanidza kunze kwekuti iwe uone zvinyorwa zvavo kunyanya mu spam emails. Botnets inokwezva vashandi mukudzivirira software yakaipa uye vashandi vanonyengera kuti vatakure iyo malware zvikuru nokuvhura chibatanho chetachiona. Isa mamiriro ekuchengetedzwa kwekombiyuta yako kuti uvandudze zviripo, kuti uone kuti iwe unogara uine zvinyorwa zvezvino.